Carlton Anosy : Nampahafantarina ny lalàna mifehy ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana -
AccueilRaharaham-pirenenaCarlton Anosy : Nampahafantarina ny lalàna mifehy ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana
13/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny hotely tetsy Anosy ny rijan-teny izay mamaritra ny fomba fiasan’ireo mpanara-mason’ny asa eny anivon’ ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, izany hoe ireo préfet rehetra manerana ny nosy no nanatrika ny lanonana amin’ny maha solotenam-panjakana azy ireo. Tafiditra indrindra anatin’ ilay tetikasan’ny vondrona eropeanina hoe Fanjakana ho an’ny daholobe ny nahavitana izao rijan-teny izao. Ny kaodin’ny “etika sy ny déontologie’’ moa dia voafaritra anatin’ ity rijan-teny ity avokoa. Tsy ataotao foana tokoa ny famatsiana ara-bola eny amin’ ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefahana ireny sy ny fitantanana, fa misy ny toetra mila ananan’ireo olom-panjakana sy ny paikady mila tontosainy. Mila miainga eny hifotony ny fampandrosoana hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ary mila miteraka sy manatanteraka fotodrafitrasa eny ifotony mba hisian’izay fampandrosoana izay. Nambaran’ny filoha hatrany ihany koa fa “ny fahavitan’ ny boky mirakitra ny fomba fiasa amin’ny fanaraha-maso ny asa tontosaina eny amin’ireo vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana dia, ezaka natao amin’ny fanjakana tsara tantana sy ny fampandrosoana hifotony” hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina
Niantso ny fiaraha-miasa malalaka ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly, eo amin’ ireo tompon’andraikitra rehetra eny hifotony , mba ahafahana mahatratra ny fanampy amin’ny fametrahana ny fitantanana eny hifotony ho lalana ho amin’ny fampandrosoana. Nomarihin’ ny filoham-pirenena hatrany fa ny fanaraha-maso ny fitantanana sy ny fomba fiasa, dia ahafahan’ireo eny ifotony manatanteraka ny fampandrosoana izay kasain’izy ireo atao, ahafahana ihany koa mahaleo tena eo amin’ ny lafin’ny fitantanana sy ny ara-bola . Nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatrany fa tsy natao fitaovana hanasaziana akory ity boky mirakitra ny fanaraha- maso eny hifotony ity, fa natao indrindra mba hanafainganana sy mba hampavitrika ny rehetra eo amin’izay lafin’ny fampandrosoana izay , indrindra ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny fitantanana.
Mitoetra any amin’ny lalam-pirenena faha-4, teboka kilometrika 406 no ahitana ny tetezan’i Kamoro mampitohyan’ Antananarivo sy Mahajanga. Nanomboka ny faha-17 ny volana jolay no efa azo nampiasaina ity tetezana ity taorian’ny fahasimbany. Nitokana ny fahavitan’ity ...Tohiny